लकडाउनमा कसरी बढ्यो ७९ अर्ब निक्षेप? कर्जा लगानी नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिन थाल्यो
अरुण सापकोटा मंगलबार, जेठ ६, २०७७, १९:०१
काठमाडौं- लकडाउनको अवधिमा पनि वाणिज्य बैंकहरुमा ७९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि भएको छ। नेपाल सरकारले कोभिड-१९ को संक्रमणलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नका लागि चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गर्दा सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएका बेला बैंकहरुको निक्षेप भने बढिरहेको देखिएको हो।
चैत महिनामा बैंकहरुको निक्षेप ४९ अर्ब रुपैयाँ बढेकोमा बैंशाख महिनामा ३० अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिएको हो। वाणिज्य बैंकहरूले बैंसाखसम्ममा ३२ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढाएका हुन्।
निक्षेप संकलन बढेपनि कर्जा विस्तार भने बैंसाख महिनामा १६ अर्ब रुपैयाँले कम भएको छ। चैत महिनामा ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएकोमा बैसाख महिनामा भने घटेको देखिन्छ। बैसाख मसान्तसम्ममा बैंकहरूले २८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्।
निक्षेपको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स लगभग आउनै छाडेपनि बैंकहरुमा भने रकम संकलन भइरहेको देखिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार फागुनको तुलनामा चैत महिनामा रेमिट्यान्स ५६ प्रतिशत घटेको छ। केही मात्रामा आएको रेमिट्यान्स पनि खर्च गर्ने ठाउँ नभएको हुँदा बैंकमै जम्मा भएर बसेको नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा बताउछन्।
सरकारको राजस्व पनि बैंकिङ प्रणालीमै रहने भएकाले चैत मसान्तमा भुक्तानी भएको राजस्व बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा भएर रहेको छ। सरकारले थोरैथोरै भए पनि खर्च गरिरहेको छ। सरकारले खर्च गर्दा उक्त पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ। यसले पनि बैंकमा निक्षेप जम्मा भइरहेको हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सरकारलगायत धेरै क्षेत्रतर्फको खर्च घटेको छ।
आयात ५१ प्रतिशतले घटेको छ। भ्रमण खर्चमा भारी गिरावट आएको छ। सरकार आफैँको खर्च ४७ प्रतिशतले घटेको छ। भएको स्रोत प्रयोग हुन सकेको छैन। साथै सुस्त गतिमा भएपनि दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीको व्यापारव्यवसाय निरन्तर छ।
लकडाउनका कारण बैंकहरुमा कर्जाको माग नै नआएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए। चैत ३० गते एनसेलले पुँजीगत लाभकर पुर्ण रुपमा भुक्तानी गरेको थियो। जतिबेला एनसेलले केही रकम बैंकहरुबाट ऋण लिएर तिरेको थियो। लकडाउनको अवधिमा एनसेलबाहेक नयाँ कर्जा लैजाने ऋणी कोही पनि छैनन्। यसले गर्दा बैंकमा पैसा मात्रै थुप्रिएर बसेको छ।
लकडाउन अवधिभर कसैको पनि नयाँ लगानी गर्ने कन्फिडेन्स नभएको हुँदा कर्जा जान नकसकेको शर्मा बताउछन्। सरकारले लगातार लक डाउन गर्दै आएको छ। सामान्य हिडडुल पनि गर्न नपाउने भए पछि कसैले पनि नयाँ कर्जाको माग गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।
लकडाउन पछि भने बैंकहरुबाट राम्रैसँग कर्जा प्रवाह हुने शर्मा बताउँछन्। अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि भोलिका दिनमा नयाँ निक्षेपको स्रोत थप सुक्दै छ। नयाँ कर्जाको माग आउने तर निक्षेपको स्रोत नहुने बित्तिकै बैंकिङ प्रणालीमा पैसा नहुने शर्माको तर्क छ। अहिले कर्जा गएन भनेर आत्तीने ठाँउ नभएको उनी बताउछन्।
लकडाउन लम्बिँदै जाने र निक्षेप मात्रै बढ्दै जाने हो भने बैंकको खर्च बढ्दै जानेछ। यस अवधिमा बैंकहरुको सेवा शुल्क बापतको आम्दानी लगभग ठप्प छ। अर्को तर्फ व्याज खर्च लगातार बढिरहेको छ। कर्जा बढ्नुको सट्टा घट्दै जाँदा व्याँज आम्दानी घट्दै जाने छ।
निक्षेप र कर्जा लगानी तत्कालका लागि घटेपनि बैंकहरु भने समस्यामा नरहेको राष्ट्र बैंकका भट्ट बताउछन्। बिग्रन सक्ने कर्जाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यसले बैंकहरूलाई केही राहत पुर्‍याउनेछ। कोभिड-१९ ले क्षति पुर्याएका क्षेत्र तर्फको कर्जामा उच्च जोखिम देखिँदै छ। यो बैंकहरुको मात्रै नभएर पुरै देशको समस्या भएको हुँदा यसलाई राष्ट्रिय स्तरबाटै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा बैंकहरु भोलिका दिनमा समस्याग्रस्त अवस्थामा नपुग्ने भट्टको तर्क छ।